बाबामम्मीले हामीलाई ओली–प्रचण्डजस्तै बनाउन खोज्नुभएको हो ? (For Saturday)
- डेजी कार्की
घरमा, चोकमा, चियापसलमा, बाटोमा सबैतिर हिजोआज राजनीतिको कुरा मात्रै सुन्छु । घरमा कोही पाहुना आउनुभयो भने बाबा र उहाँबीच राजनीतिक गफ सुरु भइहाल्छ । केपी ओलीले यसो गरे, प्रचण्डले उसो गरे ।
बेलबारी नगरपालिका- ११ मा छ हाम्रो घर । घरभन्दा थोरै पूर्वतिर सानो चोक छ, चियापसल छ । त्यहाँ भेला हुनेजति सबैका कुरा राजनीतिबाहेक अरु हुँदै हुँदैन । सायद बेला भएको छैन, त्यसैले म राजनीति केही बुझ्दिनँ । केही नेताको नाम भने अरुले जपेको जप्यै गरेर थाहा पाएकी हुँ । टीभी, फेसबुकतिर त झन् आकाआयै गर्छन् उनीहरूका नाम, फोटो र भिडियोहरू ।
बाबालाई भेट्न नपाउँदा मम्मी रुनुभयो
टोलमा हामीजस्ता बालबालिकाले सातामा एक पटक रमाइलो गर्न पाउने व्यवस्थित खेल्ने ठाउँ छैन । हाम्रो टोलनेरको सरकारी स्कुलमा पढ्ने केही साथीहरूसँग स्कुल ड्रेस एक जोर मात्र रहेछ । जुत्ता पनि पुरानो छ । कोही त मोजा नै नलगाई आउँछन् । अनि यस्तो जाडोमा टोपी नलगाई स्कुल गइरहेकाहरू पनि देख्छु । छोराछोरीले राम्रो स्याहार नगरेर प्राय:जसो घरमा हजुरबुबा/हजुरआमाहरू दुःखी हुनुहुन्छ, रोगी हुनुहुन्छ । घरमा नानीबाबुले के चाहन्छन्, उनीहरूलाई के चाहिएको छ, बाबामम्मीलाई मतलब छैन । तर, राजनीतिको कुरा गर्दा बिहान बितेको थाहा हुँदैन, चार/पाँच कप चिया रित्तिएको थाहा हुँदैन ।
म त भन्छु, राजनीतिको कुरा गरेर समय बर्बाद गर्नु बेकार हो । बाबामम्मीले हामीजस्ता केटाकेटीबारे कुरा किन गर्नुहुन्न ? हाम्रो चाहनाबारे किन सोच्नुहुन्न ? उहाँहरूलाई किन लाग्दैन, हाम्रा केटाकेटीलाई म हामीभन्दा बाठा र चतुर बनाउनुपर्छ ।
पाहुना आएकाे बेला छोराछोरीको कुरा भइहालेमा एकअर्कासित तुलना गरिदिनुहुन्छ । यो पनि राम्रो होजस्तो लाग्दैन । केटाकेटीलाई भन्दा आमाबुबालाई बढी आवश्यकता छ शिक्षाको । बाटोघाटो, चोक, चियापसलमा राजनीतिक गफ छाँट्ने सबै कसै न कसैका आमाबुबा नै हुनुहुन्छ । विवाह नगरेकाले पनि कुनै बेला विवाह गर्नुहुन्छ र आमाबुबा त हुनु नै हुन्छ । तर, उहाँहरूमा हामीजस्ता केटाकेटीबारे अहिलेकै जस्तो बुझाइ हुने हो भने परिवर्तनको के आशा गर्नु ?
मामुबाबाले डाक्टर बन् है भन्नुभा'छ, हेरौँ के हुन्छ
हामीले के सिक्ने ? अहिलेकै जस्तो ‘डर्टी पोलिटिक्स’ ? बाबामम्मी हामीलाई कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, अहिलेका नेताजस्तै ? फेरि उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ- फलानो नेताले देश बिगार्‍यो, डुबायो । तर, हामीलाई तिनै नेताका कुरा सुनाएर नाम जपाउनुहुन्छ । मेरो मनमा अझै केही प्रश्न छन्, के राजनीति नै सबथोक हो ? हामी केटाकेटी केही होइनौँ, हाम्रो भविष्य केही होइन ? नत्र किन हुन्छ राजनीतिका मात्र कुरा ? किन हुँदैनन्, हाम्रा कुरा ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस ११, २०७७, ०८:००:००